Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating ထုတ်လုပ်သူနှင့် အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုအတိုင်းငါတို့ဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating အပြင် prompt ကိုကျေနပ်န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးကွက်နဲ့ဖောက်သည်များ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအညီ Taiwan , ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးဗဟိုပြုနှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပေါ်စျေးကွက်တွင်-oriented ရုပ်သော။
ပုံစံ - CT-207
အဆိုပါအေးဂျင့်မှန် CT-207 သည်ဖလိုရင်းဖြစ်သည်-ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်သုတေသနပြုပြီးကောင်းမွန်သောဖိုင်ဘာထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကာဗွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကုသမှုအေးဂျင့်.အဓိကအားဖြင့်ဓာတုအမျှင်များအတွက်အသုံးပြုသည်.ဒီအေးဂျင့်ကြာရှည်ခံမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်,ရေတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်.
မည်သည့် PFCs မပါဝင်ပါဘူး.
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏမှာ3ဖြစ်သည်%~10% (80 အထက်ဖိအားစုတ်ယူခြင်း%)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/hydrophobic-coating-for-fabric.html
အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ အထည်များအတွက် Hydrophobic Coating ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan